🥇 ▷ Realme Q waxaa lagu dhawaaqay qaabeynta 48 kamarad gadaal… ✅
Realme Q waxaa lagu dhawaaqay qaabeynta 48 kamarad gadaal…
Realme waxay kaloo soosaaraa Realme Wired Headset, the Realme Q Protection Case, oo ku timaada midab iyo jaale ah iyo 10,000mAh Type-C oo ah koronto awoodeed oo midabbo ah, midabo, huruud iyo casaan ah.
Realme ugu dambeyntii waxay soo saartay casriga cusub ee Realme Q maanta Shiinaha. Telefoonkan casriga ahi wuxuu leeyahay saddex nooc oo kaladuwan: 4GB oo leh 64GB oo kayd ah oo lagu qiimeeyay 998 yuan (qiyaastii Rs 10,044), 6GB oo RAM ah oo leh 64GB kaydinta gudaha ah oo lagu qiimeeyay 1,198 yuan (qiyaastii Rs 12,057) iyo 8 GB oo RAM ah oo leh 128 GB oo ah Kaydinta ayaa laga heli karaa 1498 yuan (qiyaastii 15,077). Ugaarsiga ayaa bilaabanaya maanta iibkuna wuxuu bilaaban doonaa Sebtember 9 iyo wixii la mid ah Shiinaha. Realme sidoo kale waxay soo saartay madaxa headme-ka korantada ee Realme 49 yuan, kiiska difaaca Realme Q ee Realme Q, kaas oo ku yimid cawlan iyo jaalle ah, qiimihiisu yahay 39 yuan iyo 10000 mAh bidarashka nooca-degdegga ah ee nooca C oo xawaare koronto ah oo cawlan, jaalle ah iyo casaan ah qiimaha 99 yuan iyo iibintu waxay bilaaban doonaan laga bilaabo Sebtember 12
Realme Q waxay soo bandhigaysaa shaashadda 6.3-inji oo ah Full HD + oo leh xallin 2340 x 1080 pixels, naqshad hoos u dhac biyaha ah, boqolkiiba 90.6 saamiga shaashadda, iyo ilaalinta Corning Gorilla Glass. Telefoonkan ayaa ku hubeysan 2.3GHz Octa-Core Qualcomm Snapdragon 712 processor oo wata Adreno 616 GPU. Realme Q wuxuu ku shaqeeyaa midabka OS 6.0 oo ku saleysan Android 9 Bread oo wuxuu ka helaa juuska 4035 mAh batari oo aan lagag saari karin daminta korantada dabacsan ee VOOC 3.0 20W. Waxay sidoo kale leedahay HyperBoost 2.0 Sidoo kale si loo hagaajiyo khibradaha ciyaaraha.
Dhanka hore ee kamaradda, taleefankan casriga ah wuxuu leeyahay muraayad gadaal gadaal ah oo leh 48-megapixel Sony IMX586 muraayadaha ugu waaweyn oo ay weheliso PDAF, f 1.8 aperture, muraayadaha balaaran ee 8-megapixel leh f / 2.25 iyo dhererka 119-digrii. FOV, muraayadaha laba-megapixel leh aromure f / 2.4 iyo 2 kale oo megapixel ah dareemayaal qoto dheer leh from 2.4. Intaa waxaa sii dheer, dhammaan dareemayaasha waxaa lagu shaqeynayaa xasilinta muuqaalka EIS iyo tikniyo afar-in-one-pixel Bayer Bayer. Dhanka hore, Sony IMX471 AI 16-megapixel camera camera oo leh f / 2.0 aperture iyo habka quruxda AI. Telefoonkan casriga ahi wuxuu soo bandhigi doonaa dhammaan xulashooyinka isku xirnaanta caadiga ah sida VoLTE, dekedda Type-C, WiFi, Bluetooth 5.0 iwm.